Rajaonarimampianina Hery : « Filoha mihaino vahoaka » -
AccueilRaharaham-pirenenaRajaonarimampianina Hery : « Filoha mihaino vahoaka »
Voaporofo fa filoha mihaino vahoaka, ity filoha Hery Rajaonarimampianina ity. Henony ny hetahetan’ny vahoaka fa mila « gare routière » harifomba. Satria tokoa dia « gare routière » feno fotaka sy misavoritaka no nampiasain’ny mpandeha sy ny mpitatitra hatramin’izay. Dia io vita io ilay tobim-piantsonana lehibe etsy Andohatapenaka.
Maro tamin’ireny tantsaha any ambanivohitra ireny no nitaraina momba ny olan’ny toho-drano sy ny masomboly ary ny fitaovana enti-mamokatra. Efa novalian’ny filoha Hery Rajaonarimampianina avokoa izany, ary efa notaterina teto.
Tsy ny mponina an-tanàn-dehibe ihany no henoin’ny Filoha fa ny any ambanivohitra ihany koa. Farany teo, tany Saint Augustin, any amin’ny tendron’ny atsimon’ny nosy. Tany lavitra andriana , hoy ny fitenenana, kanefa dia tonga tany an-toerana mihitsy ny tenany nihaino ireo vahoaka. Fotodrafitrasa maro no vita tao an-toerana, izay bainga voavadika ihany koa. Isan’izany ny ivon-toeram-pamokarana herinaratra ao Saint Augustin mamokatra herinaratra 15 Kwc, izay ahazoan’ny mponina 3 200 tombontsoa amin’ny herinaratra. Eo koa ny fahavitan’ny biraon’ny Kaomina sy ny biraon’ny Tamia izay manara-maso ny faritra arovana Tsinjoriake. Mbola nohamafisin’ny filoha tamin’izao fidinana ifotony izao moa fa tonga hihaino ny vahoaka eny ifotony ny tenany, ka novaliany teo noho eo ny fanirian’ny mponina ny amin’ny hanamboarana ny lalana mampitohy an’i Toliara Renivohitra sy Saint Augustin.